खानपान - आजकोNepal
२५ कार्तिक २०७७, 7:16 pm
सामान्यतया हामी दिनमा तीन पटक खाने गर्छौ बिहान , दिउसो र बेलुकी । बिहान र बेलुकी खाना खाइन्छ भने दिउँसो खाजा । तर डाइटिङको चक्करमा केही व्यक्तिहरु बेलुका खाना खाँदैनन् । यसबाट उनीहरु वजन कम…
काजुको सेवनले जीवनमा हुनेछ फाइदै फाइदा
२५ कार्तिक २०७७, 6:55 pm
शरीरलाई सबैभन्दा फाइदा दिने र महँगो खानेकुरा हो काजु । काजुका सबै फाइदा नै फाइदा छन् । सामान्य मानिसलाई किन्न आँट पनि आउँदैन । महँगो भए पनि काजुका फाइदा भने धेरै छन् । ड्राइ फुडको…
कुन अवस्थामा हुदाँ मेवाको सेवन हानिकारक छ ?
२३ कार्तिक २०७७, 1:46 pm
आयुर्वेदका अनुसार मेवा सेवन शरीरको लागि जति धेरै फाइदाजनक छ त्यति नै यसका नराम्रा असरहरु पनि छन् ।
तामाको भाँडामा राखेको पानी बिहान खालीपेटमा पिउदाँ कस्ता रोगहरुले सताउदैन्…
२२ कार्तिक २०७७, 2:29 pm
तामाको भाँडामा राखेको पानी पिउदाँँ रोग लाग्न बाट बच्न सकिन्छ ।
२२ कार्तिक २०७७, 8:36 am
एजेन्सी – तरकारीलाई बास्ना दिन र स्वादिष्ट बनाउन लसुनको प्रयोग गर्ने गरिन्छ । भोजनको स्वाद बढाउनका साथै औषधिय गुण पनि हुने भएकाले यसको महत्व निकै धेरै हुने गर्छ । लसुन एन्टिअक्सिडेन्टले भरपुर हुन्छ । लसुनमा…
२० कार्तिक २०७७, 9:25 am
नेपालको पहाडी भेगमा १६ देखि ३० डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रममा फल्ने अमला एक बहुगुणी फल हो । जबजब हिउँदमा फाँटहरू खुल्ला हुन्छन्, ग्रामीण भेगमा अमलाको दानासँगै बित्छ धेरै युवायुवतीको दैनिकी । अमला खाने मुख्य सिजन भनेको…
१४ कार्तिक २०७७, 10:16 am
जाडोयाममा आइपर्ने त्यस्ता समस्याबाट कसरी जोगिने त्यसबारेमा चर्चा गरौं ।
१४ कार्तिक २०७७, 4:10 am
स्वस्थ रहनका लागि शरीर र मस्तिष्क उर्जावान् बनाउने खानेकुरा खानु अत्यावश्यक छ ।
स्वास्थ्यका लागि खाली पेटमा कफी राम्रो कि नराम्रो ?
१३ कार्तिक २०७७, 3:53 am